Ngokuqinisekileyo, elo lonke umfazi olwalamano okanye emtshatweni, ukholelwa ukuba yena kunye wakhe wakhethayo-isibini esihle, bobabini emehlweni abo, kunye nabo. Ukujonge konke okungafaniyo, ungazibuza ngokuzikhethela, kodwa ngaba kukho ubudlelwane kwihlabathi lanamhlanje elingaboniswa ngokugqibeleleyo, kwaye yiyiphi ibini elifanelekileyo ngexesha lethu?
Ngokubanzi, ukususela ixesha elide, kuncinci okutshintshile kwindlela yeengcamango ezenza ubudlelwane buhle. Ubuninzi bezinto ezichaphazela ukuphelelana kobudlelwane phakathi kwendoda nomfazi kuyafana nangeentsuku zobutsha bethu kubazali, nangaphambi kookhokho. Cinga ngamacandelo alo mbono ngokubanzi.
Nangona ebudeni bethu bebuchwepheshe obuphambili, akukho nto ishintshile ngaphambili. Luthando oluseyona nto iphambili ebunxulumene phakathi kwabantu ababini, bonke abanye bayiphumo kuphela. Ukuba kukho uthando phakathi komntu kunye nomfazi, eli liyinyathelo lokuqala, ukuze ulwalamano lwabo luhle.
Jonga ngeenxa zonke, jonga kwiintsapho zakho, abahlobo kunye nabahlobo bakho, ubuhlobo babo bubonakala bufanelekile ukuxelisa kwaye ucinge ukuba usekelwe kwisiseko sofezeko? Impendulo ngokuqinisekileyo imthanda. Ukujonga iimbini eziphambili emehlweni ethu, siqala ngokuzikhethela ukudlulisela okuthile kubo kwiintlobano zethu, into ebonakala ngathi iyimfuneko kwaye ibalulekile, into evumela ukuba ubudlelwane bethu bubhekwe njengento efanelekileyo. Akukho sikhokelo, ukuba sithatha into entle kwabanye, kuba abantu abafundi nje kuphela kwimpazamo. Ngokuzivumelanisa nokuziphatha komntu kuthi, thina siba ngcono, kwaye abanye mabaye bathabathe okuthile okulungileyo kubo.
Okwesibini ukunyaniseka nokunyaniseka
Enye yezona zinto zibaluleke kakhulu ekuzakheleni ubudlelwane obuqhelekileyo, ubuhlobo obunempilo kukukwazi ukungena kwiimeko ezingqubanayo kwiindawo ezingenanto. Kucacile ukuba nangona abo babini bebathandana, bahlala bebabini, ngamnye nomama abo ngobomi, kunye nemithetho yabo, imigaqo, iingxaki kunye nokuguquka kwemizwelo. Esinye sezikhundla eziphambili zezibini ezifanelekileyo zikwazi ukugqithisa iingongoma ezibukhali kunye nokunciphisa, kwaye oku kufuneka ukujonga izinto zemvelo, kwaye kungekhona nje ukuba umntu wenza umngane ukuba ayenze. Akukho buhlobo ngaphandle kwempikiswano, kodwa bhetele uzame ukunciphisa ngeengxoxo kunye noqhagamshelwano.
Ukuba, emva kwayo yonke into, kwenzeka ukuba iimvakalelo zithatyathwa, kunye nabantu abaphethe ubudlelwane obugqibeleleyo, abayi kuvumela nabani na ukuba babe ubungqina beentlukwano zabo. Kukho izibini ezichazwe ngokubaluleka kobudlelwane kungakhathaliseki indawo, ixesha kunye nenani labantu abakujikelezile, kodwa kunzima nawuphi na umntu wabantu abazungezile baya kuqwalasela ulwalamano lwabo ngomgangatho. Isibini apho amaqabane angaphantsi kweemeko azakuvumela ukuhlazisana, kwaye nangakumbi xa umntu-ebangela iimvakalelo ezifudumele. Ngoko, ukuba uzama ukugqwesa, zama ukuqiniseka ukuba wakho okanye omnye umntu uyazi malunga nokungavumelani okanye ukungavumelani kwakho.
Oku akuthethi ukuba ukuba into ayifanelekanga kwihambo yakho, okanye kwiingxelo zakhe kufuneka uhlale uthula, uqokelele umbi, ozayo okanye kamva uya kuphuma. Thetha omnye nomnye, xubushe ngezihlandlo ezibonakala zingalunganga kuwe, kwaye ufunde ngokukhululekile ukuxolelana.
Iintlobo ezahlukeneyo kunye nezinto ezinomdla
Ukuba isibini esilungileyo, asiyinkinga yokuba umntu omnye uthanda into enye kwaye omnye wenza into eyahlukileyo. Ingxaki ivela xa umntu engakhathaleli ukuba omnye ucinga ntoni kwaye akanandaba noko. Abantu ababini, kufuneka baqaphele iminqweno yomnye nomnye, bafanele bakwazi ukuphulaphula nokuxhasa iingxoxo kwifilimu okanye incwadi engabonakaliyo ngokukodwa, kodwa yenze enye ingcamango.
Ixesha lokuzibandakanya ezine
Abathandi ababini bazama ukuchitha ixesha elininzi ngangokunokwenzeka kunye kunye. Abayi kuhamba ngokwahlukileyo kwiholide ngaphandle komnye nomnye, abayi kuhamba ngomnye ukuya kwi-cinema okanye kwindawo yokudlala.
Ngethuba lethu, kunzima kakhulu kubo babini ukuba badibanise ixesha lokukhulula, umsebenzi ngamnye apho umntu achitha ixesha elininzi, kwaye okwesibini isebenza ngeveki yonke. Kodwa oko akufanele kube yeso sizathu sokuba ungayi kubhiyozela usuku lolwazi, usuku lomtshato kunye nezinye ezibalulekileyo kubazali kunye nabo.
Zama ukujamelana nemicimbi yemihla ngemihla, thatha kunye okanye upheke, okanye uye kwisitoreji ukuya kwisitoreji kwizinto zokutya.
Uthando olungileyo kwiintombi ezitshatileyo
Yintoni esiyifunayo ngothando?
Iimpawu zentsapho kwintlalo yanamhlanje
Indlela yokufunda indlela yokugcina imali
Indlela enembile kwilungiselelo lesithuba sakho sokuhlala
Ikhukhi kunye nejamu kunye namanqatha
Isaladi yegadi kunye namanqatha